I-China Ink Remover BT-300 yoMvelisi kunye noMthengisi | BGT
BT-300 lulwelo lokususa nawuphi na umbala we-PP kunye nezinto ze-PE ngaphandle kobushushu obufunekayo.
Kungenxa ye-PP kunye ne-PE yefilimu yokushicilela inki.
BT-300lulwelo lokususa nawuphi na umbala we-PP kunye nezinto ze-PE ngaphandle kobushushu obufunekayo. Kwavavanywa ngokusekwe kwi-inki yokuprinta kwiingxowa ezilukiweyo zombini ekhaya nakumazwe aphesheya. Iyakwazi ukucoca ngokukhawuleza nangokufanelekileyo i-inki yokuprinta engenanto kunye nolunye udaka olubangela ungcoliseko lokusingqongileyo kumphezulu wokuphinda usebenzise iimveliso ze-PP kunye ne-PE kwaye ubuyisele umbala ococekileyo nomhlophe wezinto.
Akukho ziqulatho zezinto ezinobungozi ezifana ne-phosphorus kunye ne-nitrite njl.
Akukho sidingo sokunika ubushushu ukugcina amandla ngexabiso eliphantsi lokuqhubekeka.
Ilungile kwimveliso yobuninzi bokucoceka kwayo ngokukhawuleza, njengoko ifuna kuphela i-0.5 ~ 1hour.
Ingasetyenziswa kwindalo iphela xa ibhegi iphela okanye iziqwenga ezonakalisiweyo.
Akukho zixhobo zininzi zifunekayo.
Yenzelwe ngaphandle kwezixhobo ezinobungozi kwaye amanzi amdaka akanakungcoliseka.
Iplastiki kunye neRubber
Ngokwe TDS nganye
Igubu le-25kg / iplastiki
1, Le mveliso kufuneka igcinwe kukwaleka indawo ukukhanya epholileyo.
2, litshiza ngokungakhathali iliso, nceda usebenzise amanzi amakhulu acocekileyo ukuba ugungxule.
Glo Iglavu yetyhefu iyafuneka xa isebenza.
Uninzi lweengxaki phakathi kwabanikezeli ngeenkonzo kunye nabaxumi zibangelwa kukungabikho konxibelelwano oluhle. Ngokwenkcubeko, ababoneleli banokuba mathidala ukubuza izinto abangaziqondiyo. Siphula ezo zithintelo ukuqinisekisa ukuba ufumana le nto uyifunayo ukuya kwinqanaba olilindeleyo, ngexesha olifunayo. Ixesha lokuhanjiswa okukhawulezileyo kunye nemveliso oyifunayo nguMgaqo wethu.
“UBUME BOKUQALA BUNGOKUQALA NENZUZO UYAQINISEKA”. Siyathembisa ukuba sinako ukubonelela ngemveliso esemgangathweni kunye nexabiso elifanelekileyo kubathengi. Unathi, ukhuseleko lwakho luqinisekisiwe.
(Iinkcukacha kunye ne-TDS epheleleyo inokubonelelwa ngokwesicelo ngasinye “Shiya umyalezo wakho”)
Egqithileyo Isincamathelisi sePET BT-336
Okulandelayo: Ukukhanya kwe-OB yokuqaqamba
Inki Remover For Film Bag
Inki Remover Kuba PE
I-Remover ye-Ink ye-PP
Ukususa i-Ink Remover